तपाईंको निर्वाचन क्षेत्र कहाँ हो ? हेर्नुहोस (नक्साको सूचीसहित) « Ramechhap News
तपाईंको निर्वाचन क्षेत्र कहाँ हो ? हेर्नुहोस (नक्साको सूचीसहित)
काठमाडौ , ३० असोज ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको नयाँ क्षेत्रअनुसारको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आज आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि छुट्याइएका सातवटै प्रदेशका जिल्लाहरूमा कायम निर्वाचन क्षेत्रहरू सार्वजनिक गरेको हो ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १६५ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ३३० क्षेत्रको नक्सा छुट्याइएको जनाएको छ। सार्वजनिक गरिएको उक्त नक्सामा क्षेत्रका साथै स्थानीय तह र त्यसको वडा पनि उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आगामी मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्दैछ ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको जिल्लागत निर्वाचन क्षेत्रको नक्सा यस्तो छ।